Mee iPhone Video ngosi mmịfe na Photos si iPhone na Music
> Resource> iPhone> Mee iPhone Video ngosi mmịfe na Photos si iPhone
N'ihi na iPhone na-aga na ị ọ bụla, ị na-adị njikere mgbe nile weghara foto na dekọọ vidiyo mgbe ọ bụla oge. Ekele na elu-mkpebi nke iPhone (karịsịa iPhone 4), ihe niile ị na-ahụ na-eme na iPhone anya ịtụnanya, gịnị mere ikpokọta amamiihe foto na obere vidiyo n'ime oké-na-achọ video ngosi mmịfe, ka na-enwe ma ọ bụ ịkọrọ ya na gị na iPhone mfe na-akpa ọchị.
Wondershare DVD ngosi mmịfe Nrụpụta bụ oké foto ngosi mmịfe onye maka Windows na Mac (Mountain odum gụnyere), ọ pụrụ inyere gị aka iji tọghata foto gị na dị iche iche na obere vidiyo (MP4, MOV, WMV, AVI ...) ka video playable on iPhone. Na ya ukwuu ekwekọghị & mgbanwe mmetụta na wuru na-edezi ngwaọrụ, ọ dịtụbeghị ya mfe nwere gị ahaziri iPhone videos.
Nke a ndu e dere ihe na-esonụ akụkụ abụọ, otu akụkụ ga-akụziri gị ka ibudata foto site na iPhone, na mgbe ahụ akụkụ nke abụọ ga-eduzi gị na-esi mee ka iPhone video ngosi mmịfe na foto & vidiyo si na iPhone, na-ekiri ya na iPhone.
Nkebi nke 1: otú nyefee foto site na iPhone ka PC
Ị nwere ike mfe nyefee Photos si gị iPhone gị PC, usoro dị yiri nnọọ ka ị na-eme ya na Mac 9Mac OS X 10,8 gụnyere).
Nzọụkwụ 1: Ngwa mgbakwunye gị iPhone gị PC
Nzọụkwụ 2: Open "My Computer"
Nzọụkwụ 3: Chọta gị iPhone, ọ ga-apụta dị ihe ọ bụla ọzọ igwefoto ga-
Nzọụkwụ 4: Open iPhone ịchọta gị Photos
Nzọụkwụ 5: Họrọ foto na ị chọrọ iṅomi gị na kọmputa na idetuo / mado ha n'ime chọrọ na ọnọdụ gị PC
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee video n'agbanyeghị ma ọ na-weghaara gị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụghị dị mfe dị ka ebufe photos, ị nwere ike na-atụgharị nke software dị ka Wondershare MobileGo for iOS ma ọ bụ Wondershare MobileGo for iOS (Mac) maka enyemaka.
Part 2: Olee ka video ngosi mmịfe na-ekiri na iPhone
Ozugbo i zigara foto site na iPhone na kọmputa, ihe unu kwesịrị ime bụ iji tọghata foto video ngosi mmịfe na music wee bulite ya iPhone.
Easy iji mee ka ngosi mmịfe maka iPhone:
Nzọụkwụ 1: Wụnye iPhone ngosi mmịfe onye na mbubata media.
Nzọụkwụ 2: Tinye foto ụzọ maka iPhone ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 3: hazie gị iPhone ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 4: Preview na ike ngosi mmịfe maka iPhone.
Bulite ngosi mmịfe Video ka iPhone:
Nzọụkwụ 1: Wụnye iTunes. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ya, download si ebe a: http://www.apple.com/itunes/download/
Nzọụkwụ 2: Gbaa iTunes na ike a playlist (pịa faịlụ ike ndepụta). Mgbe ahụ ịdọrọ gị iTunes ngosi mmịfe video a playlist.
Nzọụkwụ 3: mmekọrịta iPhone ngosi mmịfe video ka iTunes site na ịpị Mee bọtịnụ na ala nri akuku.
Mgbe kpọfere iPhone, ị pụrụ inweta kere ngosi mmịfe n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.